जनार्दन शर्माको अर्काे छलाङ, भदौबाट स्मार्टकार्ड ! – Everest Dainik – News from Nepal
जनार्दन शर्माको अर्काे छलाङ, भदौबाट स्मार्टकार्ड !
काठमाडौं, साउन ४ । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड)को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्ऽले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना अनुसार नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Deuba Government, janardan sarma